Germany: Wiil soomaali ah oo aabihiis dilay. - NorSom News
Germany: Wiil soomaali ah oo aabihiis dilay.
Sida ay soo tabinayaan warbaahinta lokalka ah ee magaalada Hamburg ee dalka Germany, wiil soomaali ah oo da´diisa lagu sheegay 17 sano ayaa shaley maqribkii aabihii ku dilay magaaladaas.
Booliska oo goobta uu falka naxdinta leh ka dhacay gaaray daqiiqado kadib, marka ay heleen fariinta dhacdadan, ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen wiilkii falka argagaxa leh geystay. Hadana uu xabsiga kujiro.
Warbaahinta lokalka ah qaarkeed ayaa qoreyso in wiilka soomaaliga ah ee falka ka danbeeyay uu dilka aabihii oo 57 jir ahaa u adeegsaday mindi ama toori.
Qaar kamid ah soomaalida magaalada Hamburg oo aan la xiriirnay ayaa magaca marxuumka soomaaliga ah ee wiilkiisu uu dilay noogu sheegay Nuur Faarax Xuseen.
Previous articleSh Maxamed Idriis: Xalinta Khilaafka Towfiiq waa lagu guuleystay.
Next articleMaalqabeen Norwiiji oo lagu heysto inuu baabuurkiisa jiirsiiyay wiil 3 sano jir ah.